အမေရိကန်နိုင်ငံစားသုံးသူများ၏ ကုန်စည်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးချေမှုအခြေအနေဒေတာကို ၀၃:၃၀ ညနေ MT အချိန် တွင်ထုတ်ပြန်ဖို့ ရှိပါသည်.
ငွေဖောင်းပွမှုသည် ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းအတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့အချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေဖောင်းပွမှုများလာပါကအမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်က စီးပွားရေးတည်ငြိမ်အောင် အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ ကို ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါသည်. အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်က အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ ကို US CPI (အမေရိကန် စားသုံးသူများ၏ ကုန်စည်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးချေမှုအခြေအနေ) ဒေတာကို စောင့်ကြည့်နေပါသည်. ထို့ကြောင့် ကုန်သည်များအနေနဲ့ USDကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာမှာ ထိုသတင်းအချက်အလက်ကို စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်. ဒေတာသည်မျှော်မှန်းထားတဲ့ အခြေအနေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါက ဒေါ်လာငွေကြေးတန်ဖိုးမြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်.